Guddiyada farsamada iyo shaqada ay qaban doonaan | KEYDMEDIA ONLINE
Guddiyada farsamada iyo shaqada ay qaban doonaan
Maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka u furmaya guddiyada farsamo ee lagu wado in ay Baydhabo ku kulmaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida horay loo qorsheeyay maanta waxaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ay gaaraan guddiyada farsamo ee ka kala socda Dowladda federaalka, Dowlad Goboledyada & Gobolka Banaadir ee uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Guddigan ayaa ka kooban 14 Xubnood, waxaana lagu wadaa in berri oo Talaado ah uu shir uga furmo magaalada Baydhabo, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali (Qalinle) ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu martigelinayo shirkaas, waxaa uu sheegay in shirka looga hadli doono waxyaabihii keenay guul darradii ku timid shirkii Dhuusamareeb4 , isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay waxyaabaha kasoo bixi doona shirka.
Wasiirku waxa uu sheegay in qodobada ay soo saaraan guddiyada farsamada ay u gudbin doonaan dhinacyada ay kakala socdaan, si ay si ay ugu gudbiyaan madaxda dowladda dhexe oo markaa heshiis laga gaaro khilaafka doorashooyinka.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka KGS Ilyaas Saciid Cali ayaa qiray doorka guddigan ay leeyihiin inuu aad muhiim u yahay, waxa uuna sheegay in la rajeynayo in natiijo wanaagsani ka dhalan karto, taasoo keeno doonta in dalku horay usocdo, xaaladdiisa amni iyo tan guudna ay u hagaagto.